Maalinta: 10 Oktoobar 2019
Sarkaalka Gaadiidka-Sen, DHMİ iyo Agaasimayaasha Guud ee TCDD ayagoo warqad u qoraya shaqaalaha codsiyada. Gudoomiyaha Gaadiidka-Gudoomiyaha Kenan Caliskan ayaa war qoraal ah ku sheegay; “Codsiyada DHMİ iyo TCDD'den ee laxiriira miiska gorgortanka wadareed ee anlaşıl [More ...]
Mansur Yavaş, Duqa Magaalada Ankara Magaalo Weyn, ayaa ka warqaba arjiyada magaalada ee ardayda u wanaagsan, mid mid. Duqa magaalada Yavaş wuxuu war wanaagsan siiyaa ardayda wax ka barata caasimadda oo laga dhimayo dhimista biyaha illaa gaadiidka, wadooyinka baaskiilka iyo kaarka rukhsaynta. [More ...]
Duqa Degmooyinka Magaalada Kayseri Memduh Büyükkılıç, oo ka bilaabaya xilliga xagaaga ee shaqooyinka dayac-tirka ee magaalada ayaa wali socda, ayuu yidhi. Madaxweynaha Büyükkılıç, Baghdad Street oo la dhameystiray oo shaqadiisa la cusbooneysiiyay ayaa lasiinayaa shacabka. Dawlada Hoose ee Magaalada [More ...]
Wasaaradda Dhaqanka iyo Dalxiiska ayaa furaysa Maktabadda Diyaaradaha Magaalada Istanbul, oo martigelin doonta in kabadan kun kun oo daabacaad ah oo ah 2, oo ay ka mid yihiin boqolaal shaqooyin abaalmarinno lagu guuleysto. Maktabadda illaa garoonnada carruurta, maktabaddu waxay noqon doontaa meel nasasho dhaqan ah oo rakaabku waqti ku qaadan karaan. [More ...]
Turkey Railway Machines Corporation (TÜDEMSAŞ) shaqaalaha guriga ka qof ee ugu horeeyay ee labo tareen u baryay askartii inuu wax akhriyo Surat al-Fath in badan hore ee Booth. The Republic of Turkey Tareennada State (TCDD) in wax soo saarka ee tareen iyo gaadhi xamuulka [More ...]
Waxaa loo habeeyay iyada oo hoos timaad Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha, iyada oo taageero farsamo laga helayo Agaasimaha Guud ee Maalgashiga Kaabayaasha, Agaasimaha Guud ee Wadooyinka Waddooyinka iyo Xiriirka Caalamiga ee Waddooyinka (IRF). Wadooyinka Caalamiga ah, Buundooyinka iyo Wadooyinka Gawaarida Gaarka ah ayaa albaabada u furay. Wasiirka Turhan, Congresium ee Ankara [More ...]
4. Buundooyinka Caalamiga ah iyo Wadooyinka Gawaarida Gaarka ah III. Madasha Caalamiga ah ee Metrorail Forum ee furitaanka xafladaha 9 Oktoobar 2019 ayaa lagu qabtay Ato Congresium iyadoo ay ka qeyb galayaan Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Mehmet Cahit Turhan. [More ...]
Laba qof ayaa ku dhaawacmay baabuurka 1 ee K intahya halkaas oo tareenka xamuulku uu ku dhacay isgoyska heerka. Muwaadiniinta ayaa shilka ku soo warramey goobta, kooxaha caafimaadku waxay dhaawacyada u qaadeen isbitaalka. Waxaa la bartay in hal qof xaaladdiisu ay daran tahay. Duulimaadkii 24274 ee loo adeegsaday mashiinnada mashiinka BC [More ...]
Waxaan soo uruurinay kuwa ugu caansan maalgashiga Shiinaha ee dalal badan oo ka dhex jira mashruuca Belt Road. [More ...]
Akaryakıt Satın Alınacaktır TÜLOMSAŞ İtfaiye Personeli Hizmet Alımı TCDD Led Lamba Alımı Benzer Demiryolu Haberleri ve İlginizi Çekebilecek Diğer HaberlerRayHaber 25.01.2019 Xaragada 25 / 01 / 2019 Ma jiraan diiwaanno jilicsan oo loogu talagalay 25.01.2019 ee nidaamkeenna.RayHaber 04.02.2019 İhale [More ...]
Xafiiska Bursa Guddoomiyaha ayaa diyaariyey warbixin dheer oo raadinaya maalmaha jir, Turkey ee miciinka ski ugu horeysay. Warbixinta, oo diiradda saartay casriyeynta Uludağ, ayaa loo soo bandhigay Ankara. Turkey ee miciinka ski koowaad ee Uludag, ayaa ku dhawaaqay Ra'iisul Wasaaraha Recep Tayyip Erdogan "in xnumx't [More ...]
Tareenka rakaabka qaada ee udhaxeeya Gebze iyo Haydarpa wasa waxaa loo dayriyay masiirka Köseköy Ka hor inta tareenka xawaaraha sare usocdo, tareenka qadka tareenka, oo hoos loo dhigay ka dib markii uu shaqeynayay tareenka xawaare sare ku socda, wuxuu kusii sugnaanayaa gobolka shaqo la’aanta ah ee Xarunta Saadka ee Köseköy. Daraasiin taangiyo ka badan 5 [More ...]
Maareeyaha Guud ee Gaadiidka TCDD Kamuran Yazıcı wuxuu ka qeybgalay aqoon-isweydaarsiyo ku saabsan baaxadda CD TCDD Gaadiidka AŞ 2019 Sannadka Xilliga Adeegga Tababarka Adeegga gerçekleştiril ee lagu qabtay Kuşadası. Isagoo hadalka ka dhigaya ka qaybgalayaasha halkan, Yazıcı wuxuu sharxay siyaasadaha gaadiidka ee la raacay tan iyo 2003. [More ...]
Mid ka mid ah laxiriira Degmooyinka Magaalada Kocaeli, GaadiidkaPark A.Ş. Waxay adeegyo gaadiid geysaa Jaamacadda farsamada ee Gebze (GTÜ) oo leh xariiqyo kala duwan oo 7 ah. Iyadoo basaska laga keenay gobollo kala duwan, 7 waxay ardayda siisaa gaadiid ku habboon jaamacadda. Gaadiidka iyo [More ...]
Waaxda Gaadiidka iyo Maareynta Gaadiidka Magaalada Kocaeli, Xafiiska wareega ee Caravan wuxuu bilaabay inuu buuxiyo baahiyaha sii kordhaya ee kaararka safarka, waxaa la geeyay xeebta Karamürsel. Xafiiska Xawaaladda Caravan wuxuu muwaadiniinta u adeegi doonaa illaa Jimcaha Karamürsel. 1 TODDOBAAD [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay sii wadaysaa dadaalkeeda ku aaddan ilaalinta Izmit Bay. Xaaladda guud, qiimeynta warbixinnada kooxihii xakamaynta bay'ada ee buuq ka muujiyey markab xamuul oo laga soo qaaday Gacanka Izmit Cook Islandd Banda ayaa qoray rigoore. TALOOYIN KU SAABSAN OGEYSIISKA Kocaeli Metropolitan [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay sii wadaysaa inay magaalada u keento marinno iyo casri cusub waxayna sii wadaysaa ka shaqeynta mashruuca. Waxsoosaarka iyo howlaha kale ee dhismaha ayaa ka socda buundada cusub ee 'inetin Emeç overpass Bridge', oo jirkeeda bir lagu dhejiyay lugaha bishii hore. [More ...]
Duqa Magaalada İzmir Tunç Soyer wuxuu ka qeyb galay furitaanka MAKTEK İzmir Fair. Shirkadda 370 oo ka socota toban iyo toban waddan ayaa ka qaybqaatay MAKTEK Fair (Qalabka Mashiinka, Mashiinnada Qalabka-Mashiinka, Qalabka-Goynta, Nidaamyada Cabbiraadda Tayada tayada, CAD / CAM, Qalabka Qalabka iyo Soo-saarka ee PLM) [More ...]
Shir Madaxeedka Maalgashiga Robot iyo Warshadaha 4.0 Codsiyada Xiritaanka 1-3 Oktoobar 2019 taariikhi ah ayaa lagu qabtay Yeşilköy Istanbul. Kulamada tikniyoolajiyada wax soo saarka ayaa waxaa booqday dadka 10 oo leh koror boqolkiiba 7.064 ah sanadkii la soo dhaafay. Warshadaha Warshadaha, ugu horreyn 'soosaarka ajendaha [More ...]
Waxaa tirinta loo bilaabay FESPA Eurasia, oo ah carwada bandhiga daabacaadda Gobolka Eurasia, halkaas oo waaxdu ku faraxsan tahay. FESPA Eurasia 2019, 5-8, halkaas oo diiwaangelinta khadka tooska ah ay ka bilaabatay, waxay bilaabatay daabacaadda iyo adduunka xayeysiinta warshadaha adduunka ee Xarunta Bandhigga Istanbul bishii Diseembar. isu keena hal mar. [More ...]